Malunga nathi - iNanchang Vision Garment Co., Ltd.
I-Nanchang Vision Garment Co, Ltd. ibekwe kwisixeko saseNanchang, kwiphondo laseJiangxi, China. INanchang idume ngempahla yanamhlanje yokuluka ekhaya nakumazwe aphesheya. .
Sinefektri yethu yomzi mveliso kunye nomzi mveliso wokushicilela, phantse iminyaka eli-10 yamava ukunceda abathengi bethu ngeemfuno zesinxibo sabo sophawu, ukunikezela ngemfano yokufeketha, uphawu lwedijithali yesiko, ushicilelo lokutshintshela ubushushu, ubungakanani kunye noshicilelo lwesilika.
Sigxiliswe kwizambatho ezinithiweyo ezinje nge t-shirt, ihempe yepolo, i-hoody, itanki ngaphezulu, i-pant ect., Kananjalo sinikezela ngezixhobo zeempahla ezinje ngomnqwazi, ibhegi kunye neembasa, iikawusi zezipho, unyuselo kunye neziganeko zangaphandle. Umgangatho yinkcubeko yethu, ikwinto ephambili kuthi. Sisoloko sizingisa kumgaqo "uMthengi wokuqala, uMgangatho oPhambili". Inkampani yethu ineqela leQC eliqeqeshiweyo ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zikumgangatho ophezulu ngaphambi kokuhambisa kunye nemveliso yemveliso inokwenza umgangatho olungileyo ngexesha elifutshane. Kwakhona sineqela loyilo leengcali, sinokukunceda uzobe umfanekiso wesiphumo ngokwentelekelelo yakho. Kufuneka unikezele ngokukhululekileyo kwingqondo yakho, silapha ukuze sizalisekise.
Ngaba uyafuna ukunxiba iimpahla ezenzelwe wena kunye nombono wakho? Ngaba uyafuna ukwenza eyakho impahla yesinxibo? Ngaba uyafuna ukwahluka kwaye uhlaziyeke? Ukuba kunjalo, unokucofa indawo esezantsi ekunene ukuyifumana! Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu.